အကြင်နာနန်းတော်: Blogger ပြဿနာ
Blogမှာ Postတင်ဖို့ Sign in ၀င်မရတော့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီထင်နေတာ။
ခုတော့ သိပြီ Bloggerမှာ ပြဿနာ ရှိနေတာတဲ့။
Thanks for your patience in the mean time. Posted by Andrew at 01:25 PDT
ပို့စ်ရေးသားသူ Ashin Acara. ရက်စွဲ Friday, May 13, 2011